Ụlọ ọzụzụ na Gurgaon - ITS Tech School
Ụlọ ọzụzụ na Gurgaon maka ụlọ
Ngwọta Nchọpụta Ọhụrụ ọhụrụ na-enwe isi ụlọ ọrụ na Gurgaon. OTU bụ isi na ọzụzụ IT, ụlọ ọrụ ọzụzụ na ụlọ ọrụ na-eweta ngwọta. Ụlọ akwụkwọ ITS enye ụlọ ọzụzụ na gurgaonmaka ọzụzụ ụlọ ọrụ na ebe ọgaranya na-amụ ihe na ngwá ọrụ anyị na-arụ ọrụ na mpaghara ụlọ ọrụ dị elu dịka ọhụụ nke ụlọ ọrụ ọhụụ chọrọ.
Ebe a na-azụ ihe n'ahịa na Gurgaon
ANYỊ nwere ọtụtụ ụlọ ọzụzụ na Gurgaon ya bụ na South City 1, Ụlọ Ahịa Mmanụ na Mpaghara - 14 dị nso na Huda City Center, Iffco Chowk na MG Road metro. ANYỊ nwere 13 ụlọ ọzụzụ maka ịgbazinye na Gurgaon ma nwee ike ibunye ndị 270 so na otu ụbọchị. Ọ BỤ Ebe Ọzụzụ Na Gurgaonenwere igwe nke elu-igwe, nnukwu ihe ndozi na uhie.
Ụlọ ọrụ dị:
Okpokoro ihe ndozi
Igbe na-acha ọcha na ihe nrịbama
Pen na mpe akwa
100% ike nkwado ndabere
02 oge tii / kọfị na snacks
Nri ehi anaghị eri anụ na nkuru nri
Internet - Ee, Ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ.
Kọmputa - RNNUMX GB RAM ka ngwaọrụ 4 GB RAM dị.
Ethernet LAN / Wi-Fi Njikọta
Na-etinye ego n'ihe ịga nke ọma gị
Gurgaon bụ Ụlọọrụ na ụlọ ọrụ nke National Capital Region (NCR) nke India. Gurgaon na nso nso ya na NH-8 Express, ọdụ ụgbọelu International, na-enye ihe kacha mma na mmepe azụmahịa nke ụlọ, ọ bụ njem nlekọta kacha mma. Gurgaon bụ ụlọ nke MNC na BPO, ụlọ ọrụ IT dị ka Aricent Group, IBM, EMC2, Microsoft, Oracle, Accenture, Genpact, TCS, NIIT, Sapient, Wipro na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ guzoro na Gurgaon. Ọ na-enye ụlọọrụ ọzụzụ na ụlọ ọzụzụ ndị isi ụlọ ọrụ dị na Gurgaon.
Maka ntinye akwụkwọ ozi na info@itstechschool.com
Niile ebe obibi anyị dị na Gurgaon nwere ọnụ ụlọ dị mma nke ọma nke nwere ihe eji eme ihe n'oge a dị ka Wi-Fi, igwe onyonyo, ihe nkiri, nkwado ike, dọkịta na-akpọ maka ịnọ jụụ.
Hotel Pllazio (4-kpakpando)
N'ime ụlọ nke ụlọ ndị Europe na-emepụta, Ụlọ Ahịa Pllazio na-enye ọdọ mmiri, spa na ahụike na ntụrụndụ.
700 m site na Huda City Center Metro Station & Fortis Hospital
Akwụsị mmanya maka ihe ọṅụṅụ mgbe ị risịrị nri
Egwuregwu & Ime Mmiri
Nri na Melange World Cuisine Restaurant.
Hotel Crown Plaza (4-kpakpando)
Nabata na ụzọ ọhụrụ na nke kachasị mma iji mee njem azụmahịa, ebe ị na-enwe mmetụta zuru ezu & ị ga-enweta ezigbo izu ike.
Enwere ike ịnweta oche oche
Ụlọ Nche na Mma & Nlekọta
IHG ụgwọ ụgwọ
Ebe obibi 1
B-100 A, South City 1, Ngalaba Mmekọrịta -29 Huda Gymkhana Club, Gurgaon - 122002
Ebe obibi 2
14 ngalaba, Gurgaon-122001, Haryana, India.
Ebe obibi 3